समतामा काम गर्ने २७ वर्षे विमलाकाे रहस्यमय निधन - satkar post
समतामा काम गर्ने २७ वर्षे विमलाकाे रहस्यमय निधन
काठमाडाैं : बौद्धस्थित समता अस्पतालमा आज २७ वर्षीय विमला तामाङकाे रहस्यमय निधन भएकाे छ । उनकाे शव झुण्डिएको अवस्थामा फेला परेको हाे । रामेछाप जिल्ला दोरम्बा घर भएकी विमला साेही अस्पतालमा क्लिनरको काम गर्दै आएकी थिइन् । उनी मृत फेला परेपछि आफन्तले अस्पताल परिसरमा तोडफोड गरेका छन् । तोडफोडपछि आक्रोशमा आएको भीडलाई नियन्त्रण गर्न प्रहरी परिचालन गरिएको छ ।
महानगरीय प्रहरी वृत बौद्धका प्रहरी नायब उपरीक्षक नरेन्द्र चन्दका अनुसार दुई महीना अघिदेखि यही अस्पतालमा काम गर्दै आएकी थिइन । उनकाे आत्माहत्या वा हत्या भएकाे हाे भन्ने कुरा शव परीक्षणपछिकाे सत्यतथ्य रिपोर्टले बताउने जानकारी दिए । उनका अनुसार हत्या वा आत्माहत्या के हो ? भन्ने बारे घटनाको थप अनुसन्धान भइरहेको छ । उनकाे निधनपछि आफन्तहरू निकै आक्राेसित भएकाे हेर्ने हाे भने घटना थप रहस्यमय बनेकाे पाइन्छ । उनले आत्माहत्या गरिन वा कसैले हत्या गरेकाे हाे भन्ने कुरा अनुसन्धाकाे विषय बनेकाे छ । २७ वर्षकाे कलिलाे उमेरमै किन मर्न चाहिन त ? आत्मा हत्या नै गरेकी भएपनि किन गरिन आत्मा हत्या भन्ने विषलाई अध्ययन अनुसन्धान गर्न जरूरी छ ।
घटना रहस्यमय बन्दै
एक रुपैयाँमै बिरामीको उपचार गर्ने भनेर चर्चामा आएको राजधानीको वौद्धस्थित समता अस्पतालमा यहाँकै कर्मचारी बिमलाको मृत्यु भएपछि परिवारले निष्पक्ष छानबिनको माग गरेको छ । मृतक बिमलाकाे श्रीमान् बुद्धिराज योन्जनले घटना शंकास्पद रहेको भन्दै निष्पक्ष छानबिनको माग गरेका छन् । ‘अस्पतालको ताल्चा लगाएको कोठा खोल्दा श्रीमती झुण्डिरहेको देखेँ । हत्या गरेको हो या होइन भन्ने कुरा मलाई थाहा छैन तर मृत्यु भएको मान्छेको मोबाइल कसरी अस्पताल संचालकको श्रीमतीको हातमा पुग्यो ?’ उनले भने ‘बाहिरबाट ताल्चा लगाएको अस्पतालको कोठाभित्र मान्छे कसरी म¥यो भन्ने कुरामा मलाई शंका लागेको छ । यो निष्पक्ष छानविन हुनुपर्छ । यदि हत्या हो भने दोषीलाई हदैसम्मको कारवाही हुनुपर्छ ।’ उनले अस्पताल प्रशासनले देखाएको व्यवहारले शंका गर्ने आधारहरु प्रशस्त रहेको दाबी गरे । विमला विगत २ महिनायता उक्त अस्पतालमा क्लिनरको रुपमा कार्यरत रहेकी थिइन् । यस विषयमा अस्पताल प्रशासनका कुमार बास्तोलाले मृतकका आफन्तले आफूहरुलाई अस्पताल परिसर भित्र जान नदिएको हुँदा कर्मचारी झुण्डिएको हो वा अरु नै कारणले मृत्यु भएको हो भन्ने कुरा यकिन नभएको बताएका छन् । प्रहरीले पनि घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ । मृतकका आफन्तले घटनाको निष्पक्ष छानबिनको माग गर्दै अस्पतालमा प्रदर्शन जारी राखेका छन् ।
यस्ताे भन्छन् मृतकका श्रीमान
मेरी श्रीमती बिमला हिजो सोमबार सधैँ झै बिहान ७ बजे अस्पताल जानका लागि डेराबाट हिँडेकी थिइन् । अस्पतालका एक कर्मचारीले साँझ ४ बजे विमला दिदी अस्पतालमा हुनुहुन्न भन्दै फोन गरेका थिए । कामको व्यस्तताले तत्काल अस्पताल पुग्न सकिनँ । राती ८ बजे अस्पताल पुग्दा त्यहाँ पुग्दा ३ जना कर्मचारी थिए । मलाई अस्पताल संचालनकी श्रीमतीले मेरो श्रीमतीको मोबाइल दिइन् । त्यसपछि त्यहाँ भएका कर्मचारीले मेरो मुखमा हेर्दै मुख अँध्यारो बनाए । सबै कोठामा श्रीमतीलाई खोजेँ । दुई वटा कोठामा भने लाता लगाइएको थियो । ताला लगाएको कोठा मलाई हिजोराती हेर्न दिएनन् । म रातको १२ बजेसम्म श्रीमतीको खोजीमा लागिरहेँ । आधा रातसम्म श्रीमतीलाई नभेटेपछि आज बिहान फेरि अस्पताल पुगेँ । अस्पतालको सिसि क्यामेरा हेरेँ । श्रीमती अस्पतालमा आएको क्यामेराले देखायो तर साँझ बाहिर निस्केको देखिएन ।
पक्कै अस्पताल भित्रनै हुनुपर्छ भन्ने ठानेर मैले ताल्चा लगाएको ढोका जबरजस्ती खोले । खोल्दा श्रीमती झुण्डिरहेको देखेँ । हत्या गरेको हो या होइन भन्ने कुरा मलाई थाहा छैन तर मरेको मान्छेको मोबाईल कसरी अस्पताल संचालकको श्रीमतीको हातमा पुग्यो ? बाहिर ताल्चा लगाएको ढोकामा भित्र मान्छे कसरी म¥यो भन्ने कुरामा मलाई शंका लागेको छ । यसमा निश्पक्ष छानविन हुनुपर्छ । यदि हत्या हो भने दोषीलाई हदैसम्मको कारवाही हुनुपर्छ । योञ्जनका अनुसार विमलाले समतामा क्लिनरको काम सुरु गरेको असार ११ गते दुई महिना पुग्छ । मासिक ८ देखि १० हजार रुपैयाँ तलब दिने आस्वासनमा काम लगाइएपनि हालसम्म तलब भने नदिइएको योञ्जनको दाबी छ।
विडम्बना ! जागिर सरकारी, काम निजीतिर दुःखद खबर ! अजय देवगणका पिताको हृदयघात भइ निधन सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने बाेनिताले जितिन् ५० हजार डलरको पुरस्कार विदेशमा काम गर्ने नेपाली कामदारलाई उतैबाट श्रम स्वीकृति दिने तयारी महिलाको हत्या हृदयविदारक दृश्य, ससुराली गएका श्रीमानको ढुङ्गाले हानेर हत्या पत्ता लाग्याे राज वीरेन्द्रकाे वंशनास गर्ने हत्यारा, अब कारबाही कस्ले गर्ने ? लाेकसेवाको विज्ञापन रद्द गर्ने निर्णय विरूद्द भाेलिदेखि सशक्त रूपमा आन्दाेलन गर्ने चेतावनी-भिडियो माेटरसाइकल दुर्घटनामा परि एक जनप्रतिनिधिको निधन, एक गम्भीर घाइते मलेसियाका पूर्वराजाको निधन